उज्यालोका ‘नायक’ कुलमान भन्छन्,‘देशलाई उज्यालो बनाउन पाउँदा खुसी छु’
मा प्रकाशित 128 पटक हेरिएको
दुई बर्ष अघि १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा अब अध्याँरोमा नै बस्नु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता नागरिकहरुमा छाएको थियो । दिनहुँ लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुनः लोडसेडिङको समय बढेको जनाउने गरेको थियो । दुई बर्ष अघि निकै कहालीलाग्दो अवस्थाले सबैलाई चिन्तित बनाएको थियो ।
जब कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जिम्मेवारी पाए तब जादुको छडी जस्तै गरी लोडसेडिङ हटने क्रम सुरु भयो । अन्ततः दुई बर्षको अवधिमा घिसिङको नेतृत्वमा देश पूर्ण रुपमा लोडसेडिङमुक्त भएको छ ।
दुई बर्ष अघि लक्ष्मी पुजाकै दिनबाट देशलाई उज्यालो पार्ने लक्ष्यको साथ काम अगाडि बढाएका घिसिङले लोडसेडिङ हटाएर नागरिकहरुबाट स्यावासी बलुटेका छन् । यसै विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग दियो पोष्टको लागि प्रयास पराजुलीले गरेको कुराकानीः–
दुई बर्ष अघि लक्ष्मी पुजाकै दिन देशलाई सबै उज्यालो बनाउने उदेश्यको साथ उपत्यकामा झिलिमिली पारेर लोडसेडिङ हटाउने सपना देख्नु भएको थियो । अहिले देश पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ हटेको छ । आजको दिनलाई कुन रुपमा लिनुहुन्छ ?
–दुई बर्ष अघि लक्ष्मी पुजाको उपत्यकावासीले तिहारमा बिजुली बाल्न पाइन्छ भन्ने धेरै ठूलो अपेक्षा गरेका थिएनन् । तर मैले धेरै हल्ला नै नगरी लक्ष्मी पुजाको दिन उपत्यकामा लोडसेडिङ हुन दिइन । योजना अनुसार बिजुली दिन सकियो । त्यति बेला उपत्यकामा कतै पनि बिजुली गएन । सबैले आफ्नो घर झिलिमिली बनाउन पाउनु भयो । यो प्राधिकरणको लागि निकै ठूलो खुसीको विषय थियो । प्राधिकरणलाई हेर्ने नजरमा नै पहिलो पटक परिवर्तन ल्याएका थियौ । आजको दिनलाई सफलताको दिनको रुपमा लिन चाहन्छु । यो खुसी सबै नेपालीहरुको बीचमा बाँडन चाहन्छु ।
अब प्राधिकरणले माग अनुसारको बिजुली दिन सक्छ होइन त ?
–हामीले दुई बर्षको बीचमा धेरै मेहनत गरेर अहिले लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा हटाउन सफल भएका छौं । निर्धक्क भएर नेपालीहरुले दिपावली गर्न सक्ने वातावरण सृजना गरेका छौं । दिपावली उज्यालोको पर्व पनि हो । अहिले लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा हटेको छ । माग अुनसारको विद्युत दिन प्राधिकरण सक्षम छ ।
नेपालीहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
–दिपावलीको अवसरमा सबै दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरु राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । दृढ इच्छ शक्ति भएको अवस्थामा कठिन परिस्थितिमा पनि सफलता हात पार्न सकिन्छ ।
०७३ को दिन मेरो मनमा निकै प्रश्नले घर गरेको थियो । त्यो दिन पहिलो पटक लक्ष्मी पुजामा राजधानीवासीलाई बिजुली दिने कामबाट मैले मेरो परीक्षा सुरु गरेको थिएँ । आज देशलाई नै उज्यालो बनाउन पाउदा खुसी छु । दुई बर्ष अघि मनमा कौतुहल्ता बोकेर स्युचाटार गएको थिएँ । आज ढुक्क भएर स्युचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्रमा गएँ र झीलीमिलि हेरेँ । निकै रमाईलो अनुभव भयो ।